Lalàn’i Rosia Momba ny Mpikomy: Vavolombelona 16 no Averina Tsaraina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa
Nahemotra ny Famoahana ny Didy Momba An’ireo Vavolombelon’i Jehovah 16 ao Taganrog
Efa sivy volana izao no namerenana ny fitsarana an’ireo Vavolombelon’i Jehovah 16 ao Taganrog, any Rosia. Indroapolo mahery izy ireo no niakatra fitsarana teo anelanelan’ny Jona sy Aogositra, ary mbola hiampy aza izany amin’ny Oktobra. Raha voaheloka izy ireo dia higadra sy handoa lamandy, satria fotsiny hoe namonjy fotoam-pivavahana sy namaky Baiboly ary nifanerasera tamin’ny mpiara-mivavaka taminy.
Ela loatra ilay fitsarana ka misy vokany ratsy
Efa ho 50 andro ny fitambaran’ny fotoana nivezivezen’ireo voampanga teny amin’ny tribonaly, nanomboka tamin’ny namerenana an’ilay fitsarana teo am-piandohan’ny 2015. Roa taona mahery kosa no naharetan’ilay fitsarana, raha isaina hatramin’ny fotoana tena nanombohany. Io no ela indrindra tamin’ny fitsarana Vavolombelon’i Jehovah, tany Rosia.
Mitarazoka be ilay fitsarana, ka misy vokany ratsy eo amin’ireo voampanga. Hoy i Kirill Kravchenko, iray amin’izy ireo: “Tsy afaka miasa izahay. Tsy ampy koa ny fotoana hiarahanay amin’ny fianakavianay sy hialanay sasatra.” Maromaro koa no nesorina tamin’ny asany na noterena hiala, satria be loatra ny fotoana hankanesany eny amin’ny fitsarana na satria izy Vavolombelon’i Jehovah ka afa-baraka eo amin’ny fiaraha-monina. Tsy navelan’ny fitsarana hiala tao Taganrog izy ireo tato anatin’ny roa taona, raha tsy nahazo alalana tamin’ny fanjakana.
Mampiady saina be an’ireo voampanga koa ilay fitsarana. Hoy i Tatyana Kravchenko: “Misy vokany eo amin’ny fahasalamako ilay izy. Tsy mahita tory mihitsy aho indraindray, na taitra amin’ny alina be. Mieritreritra an’ilay fitsarana foana aho ary mitebiteby.” Niditra hopitaly imbetsaka koa ny voampanga iray atao hoe Nikolay Trotsyuk, satria nitaintaina be.
Ny zava-nitranga nahatonga an’ilay famerenam-pitsarana
Nanao fanadihadiana miafina momba an’ireo Vavolombelon’i Jehovah ao Taganrog ny polisy, tamin’ny 2011. Nisy Vavolombelona 16 nampangaina tamin’ny 2012, ary nanomboka tamin’ny Mey 2013 ny fitsarana azy ireo. Rehefa avy notsaraina nandritra ny herintaona sy telo volana izy ireo, dia namoaka didy ny Tribonalin’i Taganrog fa meloka ho nitarika olona hikomy ny fito tamin’izy ireo. Nasain’ny mpitsara nandoa vola be izy fito, ary nomelohiny higadra ela be ny efatra tamin’izy ireo. Niova hevitra tampoka anefa ilay mpitsara, ka nofoanany ilay lamandy ary nataony sazy mihantona ny sazin’ireo voaheloka higadra. Nafahany madiodio koa ireo Vavolombelona sivy ambiny. Na izany aza, dia nilaza ilay mpitsara fa nitaona olona hikomy izy ireo.
Nampakatra ny raharaha tany amin’ny Fitsarana Ambony any Rostov ireo Vavolombelona 16, ary nangataka ny hafahana madiodio. Nampakatra an’ilay raharaha tany amin’io fitsarana io koa anefa ny mpampanoa lalàna, sady nilaza fa maivana loatra ilay sazy mihantona.
Nandinika ny fangatahan’ny roa tonta ny Fitsarana Ambony any Rostov tamin’ny 12 Desambra 2014, ary nanafoana an’ilay didy navoakan’ny Tribonalin’i Taganrog. Tsy nafahany madiodio anefa ireo Vavolombelona. Nekeny kosa ny fangatahan’ilay mpampanoa lalàna. Nasainy naverin’ny Tribonalin’i Taganrog koa ny fitsarana, ka mpitsara hafa no nasaina nandray an-tanana ny raharaha. Nanomboka tamin’ny 22 Janoary 2015 ilay famerenam-pitsarana, ary nanantena ireo Vavolombelona fa hivoaka tamin’ny Jona 2015 ny didy. Nilaza anefa ilay mpitsara fa hitohy mandritra ny volana Oktobra ny fitsarana. Mety ho amin’ny faramparan’ny 2015 àry izy no hamoaka didy.
Tokony hihatra amin’izy ireo koa ve ilay lalàna?
Natao hiadiana amin’ny fampihorohoroana ilay Lalàna Hanoherana ny Fikambanana Mahery Fihetsika, navoakan’i Rosia. Ampiasain’ny manam-pahefana rosianina sasany anefa ilay izy, mba hanakantsakanana ny fivavahana ekena ho ara-dalàna sy tsy manakorontana ny hafa. Misy manam-pahefana manakorontana ny fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah, eran’i Rosia. Ataony savahao ny tranon’ireo Vavolombelona, ary rarany sy alainy ny bokiny. Mampiasa an’ilay lalàna ireny manam-pahefana ireny mba hanalana tsiny ny ataony. Io lalàna io koa no nampiasain’izy ireny mba hanafoanana ny fikambanana ara-dalànan’ny Vavolombelon’i Jehovah tao Taganrog, sy hanakatonana ny Efitrano Fanjakana tao. Vao haingana koa, dia nofoanan’ireo manam-pahefana tao Samara sy Abinsk ny fikambanana ara-dalànan’ny Vavolombelon’i Jehovah tany aminy, ary nalainy ny trano fivavahany.
Efa mafy loatra ny ataon’ireo manam-pahefana rosianina, ka nandefa fitoriana 28 tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona (CEDH) ny Vavolombelon’i Jehovah. Dinihin’ny CEDH indray miaraka ny 22 amin’ireo fitoriana ireo, satria misy itovizany ny fanitsakitsahana zon’olombelona tafiditra amin’ilay izy. Milaza ny mpisolovava iray an’ny Vavolombelon’i Jehovah, fa mety ho amin’ny faramparan’ny 2015 no hivoaka ny didim-pitsaran’ny CEDH.
Nisy Fikambanana Iraisam-pirenena Nangataka ny Hanavaozana An’ilay Lalàna
Nilaza tamin’ny manam-pahefana rosianina ny Antenimieran’ny Filan-kevitra Eoropeanina fa “tsy tokony hampiasainy amin’ny fivavahana, indrindra fa amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, ny lalàna natao hanoherana ny fikambanana mahery fihetsika.” *
Manahy koa ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona, satria “maro ny tatitra ahitana fa vao mainka ampiasaina mba hanakantsakanana ny fahalalahana haneho hevitra ilay lalàna [Hiadiana Amin’ny Fikomiana], ka anisan’ny tena kendrena amin’ilay izy ny Vavolombelon’i Jehovah.” Nampirisihin’ilay komity indray ny Fanjakana Rosianina tamin’ny 31 Martsa 2015, mba “hamerina hijery avy hatrany an’ilay lalàna natao hiadiana amin’ny fikomiana, ka hamaritra tsara ny atao hoe ‘asa fikomiana.’ Tsy dia mazava loatra mantsy ilay izy.” Nilaza tamin’ny fanjakana koa ilay komity fa ‘tokony hatao izay rehetra azo atao, mba hisakanana ny fampiasana befahatany an’ilay lalàna sy hanavaozana ny lisitr’ireo boky lazaina fa mampidi-doza.’ *
Atahorana hihamafy ny fanavakavahana fivavahana
Tsy maintsy handray fanapahan-kevitra lehibe momba ny fahalalahana ara-pivavahana i Rosia. Raha voaheloka ireo Vavolombelona ao Taganrog, dia efa ampoizin’ireo Vavolombelon’i Jehovah any Rosia hoe mety ho voaheloka koa ireo namany any Samara sy Abinsk ary any an-toeran-kafa. Manantena izy ireo hoe hampitsahatra an’ilay fanenjehana ny Fanjakana Rosianina, ka hamela ny olom-pireneny rehetra hanaraka izay fivavahana tiany.
9 Jona 2008
Nandefa fitarainana momba ny Vavolombelon’i Jehovah ao Taganrog ny mpampanoa lalàna ao Rostov, satria mitarika olona hikomy, hono, izy ireo.
11 Septambra 2009
Nilaza ny Fitsarana Ambony any Rostov fa mitarika olona hikomy ny boky 34 navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah, ka norarany ny Fikambanana Ara-pivavahan’izy ireo (LRO) ao Taganrog.
8 Desambra 2009
Nanaiky an’ilay didy navoakan’ny Fitsarana Ambony any Rostov tamin’ny Septambra 2009 ny Fitsarana Tampon’ny Federasionan’i Rosia.
1 Martsa 2010
Nampidirin’ny Minisiteran’ny Fitsarana ao anatin’ny lisitry ny boky mampidi-doza ireo boky 34 nolazain’ny Fitsarana Ambony any Rostov fa mitarika olona hikomy. Nakaton’ny manam-pahefana ny Efitrano Fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah ao Taganrog.
1 Jona 2010
Nampakarin’ny Vavolombelon’i Jehovah ao Taganrog tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona ilay raharaha hoe LRO ao Taganrog sy ny Hafa miady amin’i Rosia.
30 Aprily 2011
Nisy sampam-pitsikilovana nanomboka naka video an-tsokosoko an’ireo fotoam-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah ao Taganrog.
6 Jolay 2011
Nampidirin’ny manam-pahefana ho anisan’ireo fikambanana mitarika olona hikomy ny LRO ao Taganrog.
Notorin’ny manam-pahefana ao Taganrog ny Vavolombelona any, ary trano 19 no nataony savahao.
Tamin’io ireo mpanadihady no niampanga voalohany an’ireo Vavolombelon’i Jehovah ao Taganrog, noho ny asa ara-pivavahana ataon’izy ireo.
Nanomboka notsarain’ny Tribonalin’i Taganrog ireo Vavolombelona 16 nampangaina ho mitarika olona hikomy.
29-30 Jolay 2014
Nomelohin’ny Tribonalin’i Taganrog ny fito tamin’izy ireo. Nampakatra ny raharaha tany amin’ny fitsarana ambony kokoa ireo voampanga 16 sy ilay mpampanoa lalàna, tatỳ aoriana.
Nasain’ny Fitsarana Ambony any Rostov naverina notsaraina ilay raharaha, ka mpitsara hafa no hiandraikitra an’ilay izy.
Namerina nitsara an’ireo Vavolombelona 16 ny Tribonalin’i Taganrog, nanomboka tamin’io.
^ feh. 44 “Ny Fanajan’ny Federasionan’i Rosia ny Adidy Aman’andraikiny”, Fanapahan-kevitra 1896, nolazain’ny Antenimieran’ny Filan-kevitra Eoropeanina tamin’ny 2012, fehintsoratra 25.31.
^ feh. 45 “Fanamarihana Farany Momba ny Tatitra Fahafito Fanaon’ny Federasionan’i Rosia”, nataon’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona, fehintsoratra 20.
Famerenam-pitsarana An’ireo Vavolombelona any Taganrog: Rahoviana no Hifarana ny Tsy Rariny?